Semalt: Izinto eziphezulu ezi-6 zeNkonzo yeCwecwe lokuCoca
Ukuvuna iWebhu yindlela efanelekileyo yokuqokelela ulwazi kwi-Intanethi. Kwixesha elidlulileyo, i-webmasters kunye nabaxhasi be-freelancers banokukhipha idatha kuphela xa babe nezakhono ezinkulu zokucwangcisa, kodwa ngoku inani elikhulu lokuhlamba izixhobo liqalisiwe. I-Mozenda yenye yezona zixhobo ezilungileyo kakhulu zewebhu . Inomsebenzisi-friendly interface kwaye ikuvumela ukuba ukhuphe idatha ngaphandle kwanoma yiphi izakhono zenkqubo. Iingcali zeMozenda zakha ama-web agent amaninzi enza inkqubo yezigidi zamaphepha ewebhu ngeyure. Ubunzulu babo kunye nobubanzi bamava abufanelanga, kwaye bakulungele ukwakha izisombululo eziphezulu kunye nokuxazulula iingxaki ezinzima. Iinkalo ezibalaseleyo zeMozenda zichazwe ngezantsi.
Isihloko esiphezulu # 1: Idatha efundwayo kunye nekayo
NgeMoenda, kulula ukuba nabani na ukuba bafumane idatha efundekayo kunye neyokwehla kwimizuzu embalwa. Ngokungafani nezinye iinkonzo eziqhelekileyo zokucoca, i-Mozenda ikunceda ukhiphe ulwazi kwiiwebhusayithi ezinamandla. Igqithisa izixhumanisi ezingenalusizo kwaye yenza ukuba ufuna idatha ngokukhawuleza. Ukongezelela, iMozenda yenza i-footprint egciniweyo kwiiwebhusayithi ezijoliswe kuzo ukuze kube lula kuwe ukuba unyuke amanqaku amaninzi ewebhu kunokwenzeka. Isiqendu esiphezulu # 2: Idatha engenanto yokungafihli
Inani elikhulu lezinto zokucoca zewebhu zikhupha idatha, kodwa iqulethe ezininzi iimpazamo zesipelingi kunye negrama.Ngokungafani neenkonzo, iMozenda ikufumana idatha echanekileyo kunye nephutha-ntlawulo ngexesha elifutshane. Ukuba ufuna ukukhangela amaphepha amaninzi ewebhu kwaye uxhalabele ngomgangatho, kufuneka uzame u-Mozenda kwangoko. Akuyi kukhangela kuphela idatha yakho kodwa iya kujonga umgangatho wayo kwaye isuse zonke iimpazamo kwiziphumo zokugqibela. Isiqendu esiphezulu # 3: Akukho sondlo efunekayo
Ngokungafani nezinye i-web scraper , i-Mozenda ayifuni nasiphi na isondlo kwaye isetyenziswe nayiphi na ixesha, naphi na. Nangona ungenazo izakhono zokwenza iinkqubo ezaneleyo, ungasebenzisa ngokulula le sixhobo ukufumana idatha. Ngaphezu koko, akufuneki ukuba ubhale ikhowudi ye-HTML. Ngaloo ndlela, iMozenda inokulungelelanisa abaprogram nabangewona program. Isiqendu esiphezulu # 4: Ukuhlanganiswa okulula kunye neenkqubo zoshishino
Kwimeko yoshishino ekhoyo yanamhlanje, abantu abahlukahlukeneyo basebenzisana nokuhlaziywa kwedatha kunye nokuqokelela idatha. Iinkampani zikhangele izixhobo zokucoca zewebhu ezithembisa iziphumo eziphezulu ngokukhawuleza. NgeMoenda, unokwakha i-intanethi ngokukhawuleza kwaye udibanise iintlobo ezahlukeneyo zeenkcukacha ngaphandle kokukhupha. I-Mozenda idume phakathi kwamashishini ngenxa yokuhlanganiswa kwayo neenkqubo zoshishino. Akukuhle kuphela kwimikhiqizo eyaziwa kakuhle kodwa nakwaqalayo kunye neeblogi zangasese. Isiqendu esiphezulu se-5: I-Scrapes website eguquguqukayo
I-Mozenda kuphela isixhobo esisisebenzisayo kunye namawebhusayithi ashukumisayo kwaye iququzelele kwaye isebenzise idatha eluhlaza kubasebenzisi bayo. Awudingi ukubhalwa kweempendulo kwaye ungaqala ukukhipha idatha kwimizuzwana. I-Mozenda izakufumana ulwazi olunolwazi kuwe kwiiwebhusayithi ezinamandla kwaye liza kulungiswa kwedata engaqinisekanga, ibuyise ulwazi oluchanileyo kunye nephoso. Isiqendu esiphezulu # 6: Sisekela iifom ezahlukeneyo
i-Mozenda izakukhupha idatha ize iguqule kwiifom ze-CSV, i-JSON, i-XML kunye ne-XLS.Ungayigcina idatha kwisiseko sayo okanye ukhupha kwi-hard drive yakho ngokufanelekileyo. Ngaphezu koko, iMozenda inokutshicilela zombini imibhalo kunye nemifanekiso yabasebenzisi Source .